Deux grands hommes de renom, dont Serge Henri Rodin et Andrimiariseta Andry Solofo, ont intervenu à la conférence sur le thème « les nouvelles pratiques culturelles de Madagascar, le 17 mai 2018 dans le Hall de l’Alliance Française d’Andavamamba. photo
Hifampitaona eny amin’ny Kianjan’i Mahamasina ny “hadivory fitososona” hanamarika ny fankalazana ny taom-baovao Malagasy.
ACTUALITE/ Art/ CULTURE/ Economie/ Traditionnel
CENAM : Mampiroborobo ny asa tanana Malagasy ny fanjifana azy.
“Manome lanja ny vita gasy ny fanjifana azy”. Nambaran’ny Tale Jeneralin’ny Ivon-toeram-pirenenan’ny asa tanana Malagasy (CENAM), KANTE RENE fa miroborobo ny asa tanana Malagasy rehefa mametraka ho laharam-pamehana ny fanjifana azy ny avy eto an-toerana izay vao ny avy any ivelany.
TAOMBAOVAO MALAGASY: Averina ny hasin’ny fomba amam-panao Malagasy.
Lynda ANDRIATSITONTA 0 Commentaire mar 18, 2017
Tsy fandaniam-potoana na fitia te hisehiseho ny fankalazana ny taombaovao Malagasy ho an’ny Fikambanana Fitohasina sy ny tranoben’ny koltoraly Malagasy. Entina hanarenan-kasina ny fomba amam-panao Malagasy no antony hanaovana izany.
ACTUALITE/ Artistique/ CULTURE/ Traditionnel
VAKY SÔVA: Antso an-kira mampita hafatra mankany amin’ny fiarahamonina iray .
Lynda ANDRIATSITONTA 3 Comments juin 17, 2016
Mandray anjara amin’ny ady atao amin’ny herisetra ihany koa ireo ny mpiangaly ny Vaky Sôva. Antso an-kira mampita hafatra ho an’ny fiarahamonina iray mankany amin’ny fiarahamonina ity kolontsaina Malagasy ity. Efa nanomboka ny taona 2009 no namelo-maso azy ny fikambanana TAMBOHO BE ka amin’ny volana Aogositra ho avy izao ny hetsika Festi Sôva andiany fahadimy.(…)
ACTUALITE/ CULTURE/ Histoire/ SOCIAL/ Traditionnel
Lynda ANDRIATSITONTA 11 Comments avr 4, 2016
Nivoaka tamin’ny fomba ofisialy ny sabotsy teo ny boky mandrafitra ny kolotsaina, ny fomban’ny foko Antanala. Hatramin’izay vahiny foana no nanoratra boky momba azy ka betsaka ny tantara tsy mari-pototra. Manoloana izany indrindra no namoahan’ny Zanak’Antanala boky mandrafitra ny tena kolotsainy sy ireo zava-nisy nanomboka tamin’ny vanim-potoanan’ny faha-mpanjaka ka hatramin’ny fanjanahantany. PHOTO
TAOM-BAOVAO MALAGASY: “Fomba iray entina anehoana ny fitiavana amin’ny ankohonana”.
journal madagascar 7 Comments fév 27, 2016
Manomboka amin’ny 7 ka hatramin’ny 11 Martsa ho avy izao ny fankalazana ny “Taom-baovao Malagasy” izay iraisan’ny fikambanana Fitohasina. Ao amin’ny Tahala Rarihasina sy any Ikianja Ambohimangakely no anamarihana izany. Ao anatin’izany dia hisy vela-tseho, ampisehoana ireo kolontsainan’ny foko samihafa manerana ny Nosy . PHOTO
ACTUALITE/ CULTURE/ Education/ SOCIAL/ Traditionnel
journal madagascar 6 Comments oct 17, 2015
Ho ampidirina ao anatin’ny fandaharam-pianarana manomboka any amin’ny kilasy ambany ka hatrany amin’ny kilasy famaranana ny fanabeazana ara-kolontsaina. Nisy ny atrikasa andiany voalohany nokarakarain’ny Minisiteran’ny Kolontsaina sy ny asan-tanana ny 15 sy 16 Oktobra lasa teo mahakasika izany niaraka tamin’ireo mpanabe, mpampianatra eny amin’ny anjerimanontolo, mpahay kolontsaina Malagasy,…Nizara vondrona telo ny mpandray anjara ary samy(…)